Chinja iyo default application yakapihwa kuvhura faira pane macOS | Ndinobva mac
Javier Porcar | | Tutorials, dzakawanda
Anoshanda masisitimu ane chikumbiro chakapihwa kuvhura yega yega mhando yefaira kana kuwedzerwa. Asi iyi sarudzo haina kuvharwa kana kusarudzwa nehurongwa mu macOS. Kune chero mamiriro ezvinhu isu tinogona kuchinja iko kunyorera kwatinoda kushandisa kune yakasarudzika mhando yefaira uye kuchichinja chiri nyore kwazvo.
Zvichida chinhu chekutanga kutarisa ndechekuti kunyorera kupi kunopihwa kune faira nekutadza. Kuti tiite izvi, isu tinofanirwa kutsvaga iko kunyorera muKutsvaga uye kuvhura menyu yemamiriro ekushandisa pamwe nekiyi bhatani kana kumanikidzwa neminwe miviri pane trackpad.
Kana tangova mumenu yezviri kutaurwa, isu tinotsvaga yechipiri sarudzo inozoisa "Vhura ne" yekutanga sarudzo inoonekwa kumusoro, yakaparadzaniswa nevamwe, iko kushomeka kwekushandisa. Izvi zvinotevera zvikumbiro zvinoenderana kana zvinotibvumidza kuvhura iyi application pasina kuwanda zvakanyanya, tobva tawana mukana wekutsvaga mamwe maapplication muMac App Store. Chekupedzisira, isu tinowana iyo "Zvimwe" sarudzo iyo ichatibvumidza isu kuti tichinje iyo default application.
Mushure mekuratidza vamwe, hwindo idzva rinovhura nemaapplication aripo paMac yedu.Zvinokurudzirwa kuita zvigadziridzo zviviri. Kutanga, mune yekutanga donhwe-pasi pazasi pechidzitiro, sarudza sarudzo: Yakakurudzira Maapplication. Chechipiri, simbisa sarudzo: Gara Uvhura Na.Zvino iwe unongofanirwa kusarudza kuti ndechipi chishandiso chichava icho chinotsanangurwa nekumisikidza kwerudzi urwu rwekushandisa.
Chekupedzisira, zvingave zvinokurudzirwa kutarisa kuti shanduko idzi dzaitika here. Kuti uite izvi, unogona kudzvanya pafaira uye wotarisa kuti rinovhura sezvakaratidzirwa, asi unogona zvakare kusarudza iyo faira uye nekutsvaga ruzivo rwekushandisa neCmd + i, uko ichazoratidzwa munzvimbo yepakati: «Vhura ne» uye zita rekushandisa rinoshandiswa nekutadza. Kubva panguva ino iwe unogona zvakare kushandura default application.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Chinja iyo default application yakapihwa kuvhura faira pane macOS
Ndatenda!!! hongu zvakashanda. Ini handina kukwanisa kuvhura .mer faira neSPSS. Ini handizive kana iri nyaya yeshanduro nyowani ye macOS Big Sur kana iyo nyowani SPSS 27, asi sarudzo yekuvhura mafaira asina kutsigirwa yanyangarika. Ndatenda
Ireland zvakare inoshanyirwa naTim Cook